Maamulka Galmudug garabka Cadaado ayaa faah faahin ka bixiyay illaa lix gaari ah oo xamuul ah, kuwaasoo ciidamada amniga ku qabteen koontaroolka laga soo galo, – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Maamulka Galmudug garabka Cadaado ayaa faah faahin ka bixiyay illaa lix gaari ah oo xamuul ah, kuwaasoo ciidamada amniga ku qabteen koontaroolka laga soo galo,
Allhadaaftimo November 5, 2018 November 5, 2018 Uncategorized
Wasiirka madaxtooyada ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha lagu doortay magaalada Cadaado Cumar Maxamed Diiriye, ayaa sheegay in wali gaadiidkaasi ay ku xaniban yihiin magaalada oo baadhitaano ay ku socdaan.
Wasiirka ayaa sheegay in laamaha amaanka aysan wali dhameyn baadhitaanka ay ku sameynayaan gaadiidka gaadhaya ilaa lix Candho-meed oo looga shakiyay inay hub u wadeen magaalada Dhuusomareeb.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gaadiidka ay wadeen gawaadhida aan xabadda karin oo loo waday magaalada Dhuusomareeb halkaasi oo wafuud ka socoto Qaramada Midoobay la filayay inay gaadhaan.
Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in la wareystay qaar ka mid ah darawalada waday gawaadhida ayna sheegeen in ay ka yimaadeen dalka Jabuuti, islamarkaana ay u socdeen Magaalada Muqdisho.
Laakiin wasiirka ayaa sheegay in arintaasi aysan macquul aheyn maadaama Cadaado iyo Muqdisho inta u dhaxeysa lawada ogsoon yahay meelaha qaar ee lasoo marayo inay Al Shabaab ku sugan yihiin.
Darawalada ayaa siyaabooyin kala duwan u hadlay waxay qaarkood sheegeen inay ka yimaadeen Berbera iyo Jabuuti, laakiin iyo hadda si cad looma sheegin waxa gaadiidka saaran, taasina shakiga ayay sii kordhineysaa.
Previous Qaar kamid ah caruurta uu dhalay suxufigii la dilay ee Jamal Khashoggi ayaa codsaday in lagu soo wareejiyo meydka aabahood si ay u aastaan,
Next Cadaawada ay Jaarsado u qabto Somalia khaas ahaan Puntland halkan ka daawwo,, iyaggoo sheeganaya magalada tuli guuleed oo ah Magaalo Geri koombe